အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် ဖောက်သည်ရှာခြင်း – Gentleman Magazine
အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ခုအတွက် ဖောက်သည်ရှာခြင်း
အသေးစားစီးပွားရေးဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုရဲ့ အငယ်စားပုံစံလို့ ထင်နေပါသလား?? မှားပါတယ်။
လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာ သုံးတဲ့ ဈေးကွက်ရှာနည်းတွေဟာ ငွေကုန်ကြေးကျ များလွန်းပြီး အငယ်စားလုပ်ငန်းတွေ မတတ်နိုင်တဲ့ ငွေကို ကြော်ငြာဖို့ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ အခု လက်ရှိအဆင်ပြေနေတဲ့ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကို မေးကြည့်ရင် ကြော်ငြာကိစ္စအတွက် ငွေအနည်းငယ်ပဲ သုံးထားတာ တွေ့ရပါမယ်။
ကြော်ငြာတဲ့နည်းလမ်းဟာ လုပ်ငန်းငယ်တွေမှာဆို ပုံစံပြောင်းရပါတယ်။ တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားနဲ့ ဖြန့်ဝေနည်းနဲ့ ဖောက်သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသူတွေကို ကိုယ်တိုင် သွားရောက် တွေ့ဆုံခြင်းတို့ဟာ အဆင်ပြေစေပါတယ်။ အဲဒိနည်း နှစ်နည်းဟာ ရပ်ကွက်တွင်း၊ မြို့နယ်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆိုရင် အရမ်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
တစ်ယောက် တစ်လှည့် တစ်ပြန်စီ ဖြန့်ဝေခြင်း
လူတိုင်းမှာ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ မိသားစုတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒိအရာဟာ စီးပွားရေးဈေးကွက်ရှာဖို့ နည်းလမ်းပါပဲ။ တခြား သင်နဲ့သိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကို ဖောက်သည်ရှာပေးခြင်းနဲ့လဲ သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို တိုးတက်စေပါတယ်။ ဥပမာ သင်က Taxi Stand ပိုင်ရှင်ဆိုရင် သင့်ဆီလာတဲ့ ကားဂိတ်လိုက်ပို့ခိုင်းတဲ့ အဝေးပြေးခရီးသည်ကို သင်နဲ့သိတဲ့ ကားဂိတ် ပို့ပေးလိုက်ခြင်းက သူတို့အလှည့် Taxi လိုလာတဲ့အခါမှာ သင့်ကို ခေါ်ပြီး ခရီးသည် ပြန်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ရှိနှင့်ပြီးသား စားသုံးသူတွေကို အသုံးချပါ
လက်ရှိစားသုံးသူတွေဟာ သင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ အကောင်းဆုံးကြော်ငြာတွေပါပဲ။ စားသုံးသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းစီကို အထူးဂရုစိုက်ပေးလိုက်ရင် သူတို့က စားသုံးသူ အသစ်တွေ ခေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရက်ကွက်ထဲမှာ ဆိုင်တွေ အများကြီးရှိရက်သားနဲ့ လာဖွင့်တဲ့ စတိုးဆိုင်အသစ်က ပေါက်သွားတာ တွေ့ဖူးကြပါသလား။ အဲဒါဟာ သူ့ဆိုင်ကို အစမ်းလာဝယ်တဲ့ စားသုံးသူတွေက သူ့ဆီမှာပဲ ဝယ်ချင်သွားကြလို့ပါ။
ကုန်ပစ္စည်း တွေ ခင်းကျင်းပြသထားတာနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ပစ္စည်းအဟောင်းရောင်းသလို ရောင်းတာကလဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အငယ်စားတွေအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်။ လူတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ရမှုက သင့်စီးပွားရေးကို အဆုံးမသတ် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆိုင်မှာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုခု ကျင်းပပြီး လူတွေကိုဖောင်ဖြည့်ခိုင်းလိုက်ရင်လဲ သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေကို ဖြန့်ဝေနိုင်မယ့် လိပ်စာ အများအပြား ရလာမှာပါ။
အသေးစား စီးပှားရေး လုပျငနျး တဈခုအတှကျ ဖောကျသညျရှာခွငျး
အသေးစားစီးပှားရေးဆိုတာ စီးပှားရေးလုပျငနျးကွီးတဈခုရဲ့ အငယျစားပုံစံလို့ ထငျနပေါသလား?? မှားပါတယျ။
လုပျငနျးကွီးတှမှော သုံးတဲ့ စြေးကှကျရှာနညျးတှဟော ငှကေုနျကွေးကြ မြားလှနျးပွီး အငယျစားလုပျငနျးတှေ မတတျနိုငျတဲ့ ငှကေို ကွျောငွာဖို့ သုံးလရှေိ့ပါတယျ။ အခု လကျရှိအဆငျပွနေတေဲ့ အသေးစားစီးပှားရေးလုပျငနျးပိုငျရှငျတှကေို မေးကွညျ့ရငျ ကွျောငွာကိစ်စအတှကျ ငှအေနညျးငယျပဲ သုံးထားတာ တှရေ့ပါမယျ။
ကွျောငွာတဲ့နညျးလမျးဟာ လုပျငနျးငယျတှမှောဆို ပုံစံပွောငျးရပါတယျ။ တဈဆငျ့စကား တဈဆငျ့နားနဲ့ ဖွနျ့ဝနေညျးနဲ့ ဖောကျသညျ ဖွဈနိုငျခရြှေိသူတှကေို ကိုယျတိုငျ သှားရောကျ တှဆေုံ့ခွငျးတို့ဟာ အဆငျပွစေပေါတယျ။ အဲဒိနညျး နှဈနညျးဟာ ရပျကှကျတှငျး၊ မွို့နယျတှငျး စီးပှားရေး လုပျငနျးဆိုရငျ အရမျးအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။
တဈယောကျ တဈလှညျ့ တဈပွနျစီ ဖွနျ့ဝခွေငျး
လူတိုငျးမှာ ဆှမြေိုးမိတျဆှေ မိသားစုတှေ ရှိပါတယျ။ အဲဒိအရာဟာ စီးပှားရေးစြေးကှကျရှာဖို့ နညျးလမျးပါပဲ။ တခွား သငျနဲ့သိတဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးပိုငျရှငျတှကေို ဖောကျသညျရှာပေးခွငျးနဲ့လဲ သငျ့စီးပှားရေးလုပျငနျးကို တိုးတကျစပေါတယျ။ ဥပမာ သငျက Taxi Stand ပိုငျရှငျဆိုရငျ သငျ့ဆီလာတဲ့ ကားဂိတျလိုကျပို့ခိုငျးတဲ့ အဝေးပွေးခရီးသညျကို သငျနဲ့သိတဲ့ ကားဂိတျ ပို့ပေးလိုကျခွငျးက သူတို့အလှညျ့ Taxi လိုလာတဲ့အခါမှာ သငျ့ကို ချေါပွီး ခရီးသညျ ပွနျပေးပါလိမျ့မယျ။
ရှိနှငျ့ပွီးသား စားသုံးသူတှကေို အသုံးခပြါ
လကျရှိစားသုံးသူတှဟော သငျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရဲ့ အကောငျးဆုံးကွျောငွာတှပေါပဲ။ စားသုံးသူတဈဦးတဈယောကျခွငျးစီကို အထူးဂရုစိုကျပေးလိုကျရငျ သူတို့က စားသုံးသူ အသဈတှေ ချေါလာပါလိမျ့မယျ။ ရကျကှကျထဲမှာ ဆိုငျတှေ အမြားကွီးရှိရကျသားနဲ့ လာဖှငျ့တဲ့ စတိုးဆိုငျအသဈက ပေါကျသှားတာ တှဖေူ့းကွပါသလား။ အဲဒါဟာ သူ့ဆိုငျကို အစမျးလာဝယျတဲ့ စားသုံးသူတှကေ သူ့ဆီမှာပဲ ဝယျခငျြသှားကွလို့ပါ။
ကုနျပစ်စညျး တှေ ခငျးကငျြးပွသထားတာနဲ့ လမျးဘေးမှာ ပစ်စညျးအဟောငျးရောငျးသလို ရောငျးတာကလဲ စီးပှားရေးလုပျငနျး အငယျစားတှအေတှကျ အကြိုးရှိပါတယျ။ လူတှနေဲ့ တိုကျရိုကျ ထိတှရေ့မှုက သငျ့စီးပှားရေးကို အဆုံးမသတျ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ဆိုငျမှာ ပွိုငျပှဲတဈခုခု ကငျြးပပွီး လူတှကေိုဖောငျဖွညျ့ခိုငျးလိုကျရငျလဲ သငျ့ရဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျး လကျကမျးကွျောငွာတှကေို ဖွနျ့ဝနေိုငျမယျ့ လိပျစာ အမြားအပွား ရလာမှာပါ။
Previous: အလုပ်မလုပ်ပဲ ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ စိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်ပါ။